CHROME မှာသမိုင်း RESTORE လုပ်နည်း - CHROME ကို GOOGLE - 2019
Google က Chrome မှာသမိုင်း restore လုပ်နည်း
သင်ဘရောက်ဇာကို web အရင်းအမြစ်များကိုအတွက်သွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့အရာအားလုံးမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ browsing history, - ကို Google က Chrome browser ၏အရေးအပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာ။ သငျသညျအရေးတကြီးပထမဆုံး web အရင်းအမြစ်သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အတွက်ပြန်သွားဖို့လိုအပျတယျဆိုပါစို့ပေမယ့်အရာ - သမိုင်းရှင်းလင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျကို Google Chrome အတွက်သမိုင်းကိုဖျက်ပစ်လျှင်ကံကောင်းထောက်မစွာ, ပြီးတော့အဲဒါကိုပြန်ဆယ်တင်ဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ ကြှနျုပျတို့သညျဤတာဝန်ထွက်သယ်ဆောင်ရန်အများအပြားနည်းလမ်းများကိုကြည့်အောက်တွင်။
ကို Google က Chrome browser ၏သမိုင်း restore လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Method ကို 1: အဆိုပါ operating system ကိုပြန်လည်နာလန်ထူ
Windows တွင်တစ်ဦးထူးခြားပြောင်မြောက်မှုစနစ်ကိုသင်ရွေးချယ်ထားသည့်အချက်မှပြန်လှိမ့်ဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟု function ကို restore လည်းမရှိ။ ထိုကဲ့သို့သော tool ကိုဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်သာအသုံးပြုသည်, ဒါပေမယ့်လည်းမတော်တဆဖျက်ပစ် settings ကိုပြန်သွားပါ။
ဒီ feature ကိုသုံးပါရန်, menu ကိုဖွင့်လှစ် "Control Panel ထဲက"မြင်ကွင်းကို mode ကို Set "Small Icons"ပြီးတော့အပိုင်းကိုဖွင့ ်. "ပြန်လည်ထူထောင်ရေး".
အဆိုပါဖွင့်လှစ် window ထဲတွင်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "စနစ်စတင်ခြင်း Restore".
restore ရရှိနိုင်ပါအချက်များနှင့်အတူဖန်သားပြင်ပေါ်မှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ Google Chrome က၏သမိုငျး၏ဖယ်ရှားရေး၏နေ့စွဲရှေ့ပြေးသောတဦးတည်းကိုရွေးချယ်ပါ, ထိုပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ပါ။
အဆိုပါ recovery procedure ကိုပြီးစီးပြီးနောက်, browser ကိုသမိုင်းကိုပြန်မသွား။
Method ကို 2: cache ကိုမှတဆင့်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်းပုံပြင်များ
ဤနည်းလမ်းကိုအတော်လေး recover မဟုတ်ခှငျ့ပွုထားပေမယ့်မှသာအရာသငျသညျကိုရယူချင်မှ site တစ်ခုကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားရန်။
သငျသညျကို Google က Chrome ၏ cache ကိုရှင်းလင်းမပြုခဲ့ပါလျှင်ဤနည်းလမ်း, ထိုအမှုအတွက်သာပြုမူလိမ့်မယ်သတိပြုပါ။
သင်၏ Web browser ၏လိပ်စာအညီဒီလိုလုပ်ဖို့အောက်ပါလင့်ခ်ကိုသွားပါ:
chrome: // cache ကို /
မျက်နှာပြင်သင့်ရဲ့ cache ကို progruzhenny ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏အားလုံးပြပေးလိမ့်မယ်။ ဤစာရင်းတွင်အသုံးပြုခြင်း, သင်နောက်တစ်ကြိမ်ရယူချင်သော website တစ်ခုကိုရှာဖွေကြိုးစားနိုင်ပါ။
Method ကို 3: ပြင်ပ program ကိုသုံးပါ
သောကြောင့် သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ကို Google က Chrome ကို web browser ၏သမိုင်းဖြစ်လျှင်ဤလမ်းအတွက်ကျွန်တော်တစ်ဦးပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့ဖိုင် restore ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်, ဖိုင်တစ်ခု "သမိုင်း" အဖြစ်သိမ်းဆည်းထားသည်။
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကျနော်တို့ restore ပြန် Third-party အစီအစဉ်များ၏အကူအညီကိုရှာခြင်းငှါဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအစီအစဉ်များအကြောင်းပိုမိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျနော်တို့ပြီးသား site ပေါ်တွင်စကားပြောရန်အခါသမယရှိခဲ့တယ်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: ပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့ဖိုင်တွေကို recover လုပ်ဖို့ဆော့ဝဲ
သငျသညျကိုဆုံးဖြတ်ရန်အဘယ်သို့အစီအစဉ်ကိုမသိလျှင်, ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်သည် Recuva ကိုရွေးဖို့အကြံပြုလိုတယ် ဒီသင်သည်သင်၏စနစ်၏အသေးစိတ်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးထွက်သယ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုထားတဲ့ဟာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖိုင်ဆယ်တင်ရေးကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
Recuva ပရိုဂရမ်ကို Download လုပ်ပါ
အဆိုပါ restore software ကိုမဆိုအသုံးပြုခြင်း, သင်အတိအကျကိုစကင်ဧရိယာအထက်တွင်တည်ရှိသည်ဟုအမည်ရ, ဖိုင်တွဲထားတဲ့အတွက် file ကို "သမိုင်း" ကိုသတ်မှတ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်:
ကို C: Documents and Settings အမည် ဒေသခံက Settings Application ကိုဒေတာများကို Google က Chrome ကို user data Default
အဘယ်မှာရှိ "အမည်" - သင့်ရဲ့ PC ပေါ်မှာသုံးစွဲသူအမည်ဖြစ်တယ်။
program ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ပြီးသွားပြီးတာနဲ့ရလဒ်များကိုဖတ်ပါ။ "သမိုင်း" ၏နာမကိုအမှီနှင့်အတူရလဒ်ပြန် directory ထဲတွင် "ပုံမှန်" ချွေတာ, ပွနျလညျထူထောငျရမညျ။
စည်းကမ်းအဖြစ်ဤ Google Chrome ကို web browser ကိုအတွက် browsing history ပြန်ပေးဖို့အဓိကနည်းလမ်းဖြစ်တယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးသို့ရောကျဖို့မဆက်သွားဖို့ကိုဖယ်ရှားသို့မဟုတ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသမိုင်း browsing, ဒါမှမဟုတ်ပဲ tabs များအတွက်အရေးကြီးသောက်ဘ်စာမျက်နှာများကိုကယ်ဖို့မကြိုးစား။